LinkedIn mandefa Demografika momba ny tranokala Linkedin | Martech Zone
Alakamisy, Jolay 27, 2017 Alarobia, Jolay 26, 2017 Douglas Karr
LinkedIn dia mamaky endri-javatra vaovao lehibe amin'ny herinandro ho avy, Drafitra LinkedIn LinkedIn. Ny tranonkala demografika dia mampiasa angona avy amin'ny mpikambana 500+ tapitrisa ao LinkedIn hanomezana fahafantarana ireo mpitsidika tranokalan'ny orinasanao amin'ny fomba manaja ny tsiambaratelon'ny mpikambana.
Manasongadina interface mora vakiana ao amin'ny LinkedIn Campaign Manager, Website Demographics mamela anao hanivana ny mpihaino tranokalanao amin'ny lafiny matihanina 8, anisan'izany ny:
Tranonkala Demografika dia hamela anao hanivana isaky ny daty hahalalanao raha nampiroborobo ny fifamoivoizana avy amin'ireo mpihaino tadiavinao io fampielezan-kevitra vao haingana io. Inona koa, azonao jerena izao raha nanintona ireo dobo fanantenana vaovao ao amin'ny tranonkalanao ianao. Amin'ireto fomba fijery ireto dia azonao atao ny mamorona votoatin'ny marketing vaovao natao mba hanakoako kokoa amin'ny mpihaino.
Ohatra, ndao atao hoe mihazakazaka marketing ho an'ny orinasa IT ianao ary mikendry ny mpitantana teknolojia monina any Etazonia. Rehefa jerena ny sotasota Demografia tranokalanao, dia hitanao fa ny mpitantana ny fahasalamana EMEA dia mitsidika pejy iray vokatra mihoatra ny noeritreretinao. Vita amin'ity fahalalana ity, azonao atao ny manitsy ny paikadinao amin'ny varotra hitodihana any amin'ity mpihaino vao hitanao ity.
Website Demographics dia manome antsika fahitana tena mahasoa momba ny fizarana samihafa amin'ny tranonkalantsika iraisam-pirenena. Manampy anay hahatakatra mazava tsara raha toa ka mahatratra ny mpihaino mahitsy amin'ny paikadim-barotra amin'ny Internet izahay ary manome fahazavana momba ny mpijery tranonkala mandritra ny androm-piainan'ny mpanjifa iray manontolo. Bhanu Chawla, Lehiben'ny paikady nomerika, Cornerstone OnDemand
Ny tranokalan'ny LinkedIn Demografika dia fandrosoana lehibe amin'ny fanampiana anao handray fanapahan-kevitra ara-barotra bebe kokoa hampitombo ny orinasanao. Amin'ny fahafahanao manangona hevi-baovao alohan'ny, mandritra na aorian'ny fampielezan-kevitra, azonao atao ny manatsara ny paikadinao ary mandray fanapahan-kevitra tsara momba ny varotra.
Tags: Analyticsorinasahaben'ny orinasafirenenafirmagraphicsorinasaasa asazokiolona asaanaran'ny asaLinkedIndemografika momba ny tranonkala mifandraytoeranafamakafakana tranonkalatranonkala demografika
31 Jul 2017 amin'ny 1:52 PM
Hi Douglas Karr, Misaotra betsaka noho ny nanoratanao momba ny Demografika momba ny Tranonkala Linkedin. Hanampy betsaka antsika amin'ny marketing amin'ny tranonkala izany.